Kusemthethweni: UJohn Ternus, usekela Mongameli oyi-Apple kwi-Hardware | Ndisuka mac
Nangona ukuqeshwa kwamanyathelo amatsha kunye nokwenyusa ngaphakathi kwenkampani kuphehlelelwa kwimimoya yomine ngolwazi oluvela kwinkampani okanye ezo zivela kumarhe, azenziwanga ngokusemthethweni de zivele kwiwebhusayithi yenkampani. Ezi ntsuku u-Apple ulitshintshile iphepha ukwazisa ukuba ngubani ongusekela Mongameli omtsha wobunjineli behardware: UJohn ternus
Ukutyunjwa kukaJohn Ternus yenziwa ngoJanuwari xa uTim Cook wabhengeza oko UDan Riccio wayeza kuzinikela kweminye imisebenzi ngaphakathi kwenkampani. Okwangoku asazi kakuhle ukuba uRiccio wenzani, abanye bathi ubeka yonke inyama kwigrill ukuze izixhobo ezintsha zear / vr ezivela kwiApple. Inyani yile yokuba isuswe kwiwebhusayithi apho bonke abo bakhokela iApple bavela kunye noTim Cook kwindawo yokubamba.
Ngokuhlaziywa kwewebhusayithi, uJohn Ternus sele edwelisiwe njenge USekela Mongameli oMkhulu wezoBunjineli beHardware kwaye njengoko kubonisiwe kwiphepha ngokwalo:
UJohn Ternus ngu-Sekela Mongameli we-Apple kwi-Hardware Engineering, enika ingxelo kwi-CEO uTim Cook. Khokela bonke ubunjineli behardware, kubandakanya amaqela emva kwe-iPhone, i-iPad, iMac, ii-AirPods, kunye nokunye.
UJohn wajoyina iqela le-Apple Design Design ngo-2001 kwaye waba ngu-Mongameli we-Hardware Engineering kwi-2013. Ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakhe e-Apple, uJohn ukongamela umsebenzi wobunjineli behardware kwiintlobo ngeentlobo zeemveliso ezintsha. Ukubandakanya sonke isizukulwana kunye nemodeli ye-iPad, umgca wokugqibela wee-iPhones, kunye nee-AirPods. Ube yinkokeli ephambili kutshintsho oluqhubekayo lweeMacs kunye neApple Silicon.
Phambi kweApple, uJohn wayesebenza njengeenjineli ezisebenza ngoomatshini kwiNkqubo yoPhando oluqinisekileyo. Une Isidanga sobunjineli boMatshini ukusuka kwiYunivesithi yasePennsylvania.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Kusemthethweni: UJohn Ternus, usekela Mongameli oyi-Apple kwi-Hardware Engineering